CoreOS Container Linux dia hahatratra ny faran'ny androm-piainany mahasoa amin'ny 26 Mey 2020 | Avy amin'ny Linux
CoreOS Container Linux dia hahatratra ny faran'ny fiainana amin'ny 26 Mey 2020
Andro vitsy lasa izay dia nanjary fantatra ao amin'ny bilaogy CoreOS ny daty famaranana ny fanohanana ny fizarana, satria nosoloin'ny tetikasa Fedora CoreOS (taorian'ny fahazoana ilay tetikasa Core OS, Red Hat dia nanambatra ny Fedora Atomic Host sy CoreOS Container Linux ho vokatra iray).
Ho an'ireo tsy zatra CoreOS, tokony ho fantatr'izy ireo izany rafitra fandidiana maivana (fork an'ny Chrome OS) loharano misokatra miorina amin'ny kernel Linux sy natao hanomezana fotodrafitrasa ho an'ny fametahana cluster, raha mifantoka amin'ny mandeha ho azy, mora ny fametrahana fampiharana, ny filaminana, ny fahamendrehana ary ny scalability.
Amin'ny maha rafitra miasa anao, tsy manome afa-tsy ny fampiasa faran'izay kely indrindra ilaina amin'ny fampiharana ny rindranasa ao anatin'ireo kaontenera rindrambaiko, miaraka amin'ireo mekanika namboarina mba hahitana ny serivisy sy ny fizarana fikirakirana.
Ny 26 Mey 2020 dia hahatratra ny faran'ny fiainany mahasoa ary tsy hahazo fanavaozana intsony. Manoro hevitra mafy izahay ny hanombohan'ny mpampiasa hamindra ny asany any amin'ny rafitra miasa hafa haingana araka izay tratra.
Amin'ilay fizarana CoreOS Container Linux, ilay tetikasa Fedora CoreOS nindrana ireo fitaovana fanamboarana eo amin'ny sehatry ny fandrehitra, rafitra fanavaozana ataoma ary filozofia ankapobeny momba ny vokatra.
Avy amin'ny Atomic Host, ny teknolojia dia nafindra hiasa miaraka amin'ny fonosana, fanohanana ny mari-pahaizana OCI (Open Container Initiative) ary ny mekanisma fitokana-monina fanampiny mifototra amin'ny SELinux. Amin'ny ho avy dia kasaina hanomezana fampidirana Kubernetes (ao anatin'izany ireo mifototra amin'ny OKD) amin'ireo kaontenera mandahatra ao amin'ny Fedora CoreOS.
1 Famaranana ny vanim-potoana fiainana
2 Fifindra-monina avy any CoreOS mankany Fedora CoreOS
Famaranana ny vanim-potoana fiainana
Ny fanavaozana farany halefa, kasaina havoaka amin'ny 26 Mey, aorian'izay dia hifarana ny fihodinan'ny tetikasa.
Raha ho an'ny 1 septambra amin'ity taona ity ihany, Hesorina ireo loharanom-baovao mifandraika amin'ny CoreOS na ho vakiana fotsiny izy ireo.
Ohatra, hamafana ireo sary fametrahana, fananganana rahona ary fanavaozana ireo toerana natolotra ho fampidinana. Ny kitapom-bolan'ny GitHub sy ny fanarahana ny bug dia hijanona ho vakiana ihany.
Fantatray fa masiaka ity fandaharam-potoana ity. Niezaka nanolotra ny fe-potoana fifindra-monina lava indrindra mifanaraka amin'ny fahafahantsika mitazona ny rafitra fiasa izahay. Handray ny dingana tsy mahazatra izahay amin'ny fanesorana ireo vakoka sy sary CoreOS Container Linux aorian'ny 1 septambra mba hanakorontanana ny fampiasana mitohy rehefa tsy mahazo fanavaozana fiarovana intsony ny rafitra miasa.
Fifindra-monina avy any CoreOS mankany Fedora CoreOS
Ho an'ireo mampiasa CoreOS, notsorina ny fifindra-monina tany Fedora CoreOS, toy ny boky nomanina iray no nomanina izay manazava ny tena maha samy hafa azy.
Amin'ny endriny ankehitriny, ny Fedora CoreOS dia tsy afaka manolo tanteraka ny CoreOS Container Linux satria tsy misy fitaovana fitantanana fitoeran-javatra rkt, tsy mifanaraka amin'ny sehatra Azure, DigitalOcean, GCE, Vagrant ary Container Linux, ary tsy manilika ny mety hisian'ny fanovana mihemotra sy ny fanitsakitsahana mifanentana.
Ho an'ireo tsy manana fahaizana na faniriana hiova amin'ny Fedora CoreOS, Azonao atao ny mandinika ny fork Flatcar Container Linux izay mifanaraka amin'ny CoreOS Container Linux.
Ity fork ity dia natsangan'i Kinvolk tao amin'ny taona 2018 taorian'ny nanambaran'i Red Hat ny fikasan'izy ireo hampiditra ny haitao CoreOS amin'ireo vokatra vokariny. Ny tetikasa dia noforonina mba hiantohana ny fitohizan'ny fisian'ny CoreOS Container Linux, raha misy fiovana lehibe na fanamafisana ny fampandrosoana.
Flatcar Container Linux nifindra tamin'ny fotodrafitrasa tsy miankina aminy manokana ho an'ny famoahana, ny fikojakojana, ny fanangonana ary ny famoahana ny famoahana, saingy ny satan'ny codebase dia nifanindry tamin'ny CoreOS (nidina ny fanovana mba hanoloana ny marika).
Amin'izany fotoana izany, novolavolaina ny tetik'asa raha jerena ny fahafaha-manao amin'ny fotoana rehetra manohy fisiana misaraka raha sendra manjavona avy amin'ny CoreOS Container Linux. Ohatra, ao amin'ny sampana "Edge" misaraka ho an'ny Flatcar Container Linux, dia notanterahina ny fanandramana niaraka tamin'ny fiasa vaovao sy ny fampiharana ny patch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CoreOS Container Linux dia hahatratra ny faran'ny fiainana amin'ny 26 Mey 2020
Jailhouse hypermaster fizarazarana fizarana izay miloka amin'ny fampisehoana